Kuhlelwe umcimbi wabesifazane | News24
Kuhlelwe umcimbi wabesifazane
ISITHOMBE: sithunyelweLynette Ntuli ozobe eyisikhulumisi sosuku.
KUHLELWE umcimbi wokukhuthazana phakathi kwabantu besifazane abasebancane nozobanjelwa ePunoza Boutique Hotel KwaMpumuza ngoMgqibelo mhlaka-3 kuLwezi (November) kusuka ngehora lesithathu ntambama (3 pm).
Lo mcimbi obizwa ngokuthi i-Ladies Circle Experience uzobe wenzeka okwesibili kulonyaka kanti kuhloswe ngawo ukunikeza ithuba abantu besifazane ukuba bahlangane baxoxe ngezinto ezahlukene bebodwa. Uzophinde uhlanganise nomkhankaso wezinsuku ezili-16 zokuqwashisa ngokuhlukunyezwa kwabantu besifazane kanye nezingane nowaziwa nokuthi i-16 Days of Activism.
Ngokusho komhleli walo mcimbi uMnuz Ndumiso Nzuza uthe into eyenza ukuba baqale umcimbi onjengalona ingoba bakholelwa ukuthi ziningi izinto abantu ebesifazane abangakwazi ukuzenza ngaphandle nje ngokuba amakhosikazi ahlala endlini angenzi lutho.
“Leli ithuba labo lokuba bafunde ngezinto ezahlukene abangazenza emikhakheni eyahlukene abafuna ukuzithuthukisa kuyona.
“Kulo nyaka isikhulumi sethu sonyaka umuntu ophuma kwezezindlu kanye nezengqalasizinda nokuyimikhakha ekugcwele kakhulu kuyona abantu besilisa.
“Sifuna abantu besifazane bazifunde lezi zinto bazi futhi ukuthi akhona amathuba abo noma ikomuphi umkhakha abawuthandayo,” kubeka yena.
Uthe abafuna nokuthuthukisa baphinde bakhuthaze abesifazane.
Amathikithi okungena kulo mcimbi abiza-R100 kanti ayatholakala ngokuthi ushayele lenombolo: 079 964 5095.